Stephen Michael Schwartz: "Jab kasta oo na soo gaara, xittaa dhimashadii dhacday waa naga go'an tahay in Soomaaliya aan nabadda dib u soo celino" | YoobsanNews.com
Stephen Michael Schwartz: “Jab kasta oo na soo gaara, xittaa dhimashadii dhacday waa naga go’an tahay in Soomaaliya aan nabadda dib u soo celino”
Yoobsannews. May 7, 2017: Safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Michael Schwartz ayaa sheegay in Dowladiisu ay dardar gelineyso taageerada Soomaaliya ay ka siineyso la dagaalanka Alshabaab, isaga oo ka tacsiyeynayey askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha Soomaaliya, wuxuu safiirku sheegay in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan Dowladda Soomaaliya & ciidamada Midowga Afrika, si lagaga adkaado xooggaga Alshabaab.
“Jab kasta oo na soo gaara xittaa dhimashadii dhacday waa naga go’an tahay in Soomaaliya aan nabadda dib u soo celino; Mareykanku wuxuu balanqaadayaa inuu diyaar u yahay in Soomaaliya & ciidamada Afrika uu ku gacan siiyo dagaalka ka dhan ah Alshabaab” Ayuu yiri Stephen Michael Schwartz:
Habeenkii Jimcaha ee bisha May ay 5 aheyd ayaa ciidamo isugu jira Soomaali & Mareykan waxeey weerar ku qaadeen deegaanka Daarusalaam ee Gobolka Sh/hoose, waxaanna dagaalkaasi dadkii ku dhintay ka mid ahaa askari Mareykan ah.
Previous: Damu Jadiid oo Hadimo ku foorarta Madaxweyne Farmaajo diyaarinaya.
Next: Xildhibaan Dhubad ” Warbaahin ayaa iga Been abuuratay oo aan Wax Wareysi ah siinin”.